Halatra nikela Ambatovy : orinasa any Seychelles ahina ho atidoha #canada #sherrit #ambatovy | NewsMada
Tambajotra sy halatra avo lenta! Araka ny efa notaterina teto, nisy halatra nikela tao amin’ny orinasa Ambatovy, nanomboka ny taona 2014. Taorian’izay, nahatraran’ny sampana Polisy mpiandry sisin-tany (Paf) birikina nikela 54 ny teratany poloney, Maciek Pankocsky, teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato, hanana fikasana ho any Maorisy.
Araka ny loharanom-baovao, ahina ho tompon’antoka amin’ity halatra avo lenta ity, mandrindra ny tambajotra ny orinasa Azure resources Ltd , manana foibe atsy Victoria Seychelles.
Nahatratra 80 t ny nikela nahodin’ity tambajotra ity ny taona 2014. Tratra taty Madagasikara ny 76 t, fa tsy fantatra ny nalehan’ny 4 t ambiny.
Nametraka fitoriana ny orinasa Ambatovy. Raha ny farany, taorian’ny didy fikarohana sy fampisamborana natao, tratra teny amin’ny seranan’Ivato i Maciek Pankovsky. Hatreto, tsy mbola nisy voasazy na nidtra am-ponja ny voarohirohy. Mikasika ity Poloney Maciek Pankovsky ity, milaza fa marary izy, manome fanazavana ara-pahasalamana, fa tratry ny “colique néphrétique”, fanaintainana any amin’ny lamosina, ka tokony haiditra hopitaly. Nefa ny mahavaraina, mandà ny hanaovana fitiliana lalina amin’ny “scanner” izy.
Azo raisina fa mitady fomba rehetra ity voarohirohy ity hitsoahana indray ny fitsarana. Eo am-pelatanan’ny mpitandro filaminana izy nanomboka ny alarobia 10 febroary teo. Nanamafy ny fitoriany anefa ny tetikasa Ambatovy.